36 kacha mma okpu nkuzi ọzụzụ akwụkwọ iji mee ka nkà gị dị elu
Uhie okpu nkuzi onye nkuzi
36 Best Hat Hat nke a zọpụtara ọzụzụ
1. Red okpu - RHCSA na RHEL 7
2. Red okpu - RHCE na RHEL 7
3. Uhie Red Hat Enterprise Performance Tunning
4. Redhat JBoss nchịkwa nchịkwa m
5. Uhie okpu JBoss Ngwa Administration II
6. RHCSA Rapid Track course (RH199)
7. Oghere Red Hat OpenStack Administration (CL210)
9. Red okpu System System III
10. Red Hat Enterprise Clustering na Nchekwa Management
11. Red Hat Enterprise Deployment and Management Systems (RH401)
12. Ogwe ọkụ Satellite 6 Administration (RH403)
14. Red Hat Ceph Nchekwa Nhazi na nchịkwa
15. Oghere Red Hat OpenStack nchịkwa m
16. Oghere Red Hat OpenStack Administration II
17. Uhie uhie CloudForms ngwakọ nchịkwa ojii
18. Uhie uhie CloudForms ngwakọ ojii ọrụ
19. Ozizi Apache Qpid na Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform
20. Ozi RabbitMQ na Red Hat OpenStack Platform
21. Nnukwu nnweta na Red Hat OpenStack Platform
22. Uhie okpu JBoss Enterprise Development Development
23. Nyochaa na Red Hat JBoss Operations Network
24. Development SwitchYard na Red okpu JBoss Fuse Ọrụ Ọrụ
25. Mgbasa Camel na okpu uhie JBoss Fuse
26. Ịmepụta Ngwa Ngwaọrụ na okpu okpu JBoss BPM Suite
27. Ọrụ ntinye oru nke ndị ahịa na Red Hat JBoss Fuse
28. Uhie okpu JBoss A-MQ Development na Deployment
29. Egwuregwu egwu JBoss na-agba ọsọ ọsọ
32. Iwu Iwu na Redhat JBoss BRMS
33. Na-arụ ọrụ na Redhat JBoss BRMS
34. Iwuli elu uhie okpu ahia ngwa ahia
35. Uhie okpu Gluster Storage Administration
36. Oghere uhie OpenStack Administration III (CL310)
Uhie okpu onye nkuzi nkuzi (RHCTP) ndi mmadu na-enyere Uhie okpu ihe obula na ndi mmadu na-eme ihe okike, ndokwa di iche iche na-eme ka ha buru ezigbo uru. RHCTP na-agbanye aka n'osisi nke Uhie okpu wee kwado ndị mmadụ nke bụ ụda ngwakọta nke ndị ọkachamara nwere ọkachamara. E nwere nnukwu ọdọ mmiri nke na-achọ ịbanye ma ọ bụ debe nzere ha na oghere Open Source ọhụrụ oghere nke okpu okpu na-agbaghara ike ọrụ. Ndị otu mmadụ RHCTP na-ewere mgbe Red Hat na-akụziri ndị mmadụ ihe dị iche iche ka ha na-enye azịza maka ndị ahịa ikpeazụ. Ndị ọrụ RHCTP na-arụ ọrụ na Uhie okpu iji gosipụta azịza dị mkpa, ogologo oge, azịza a pụrụ ịdabere na onye chọrọ inweta IT mkpa.
Nchọpụta Ntanetị ọhụrụ abụghị Onye Mgbasa Ọkụ Ọkụ Uhie. Nchọpụta Ntanetị Ọhụrụ (Red Hat Training Partner) na-enye Red Hat akwụkwọ ọmụmụ Ọzụzụ online / kwụsịrị na 9 pụrụ iche na India: Bangalore, Chennai, Delhi, Gurgaon, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, Noida na Pune.
Ma ị na-achịkwa ikike gị ma ọ bụ ịmepụta ikike ọhụrụ dị ọhụrụ, nke a bụ ebe ihe niile na-amalite. Ihe omume Ace maka Red Hat Enterprise Linux®, Uhie okpu JBoss® Middleware, Uhie okpu OpenStack® Platform, nke ahụ bụkwa nanị ọnụ mmiri ice.
Debe uzo zuru oke nke uhie okpu nkuzi akwukwo mara ya ma chọputa usoro nke na enyere gi aka.
Okpu Uhie na-enye ohere maka RHCSA ka ọ tụlee na-ewere ma ọ dịkarịa ala otu n'ime klas nkuzi ntụziaka ya iji kwadebe. Enweghị òkè na klas ndị a anaghị achọrọ, otu ga-ewe naanị ule. Ọtụtụ ndị asọmpi dị irè bụ ndị bịara na klas dị ka ndị nwere ugbu a ikike na ozi akụkọ na klas ahụ nwere ọganihu bara uru nye ha.
Iji nweta ihe nzere RHCE, otu onye ga-ebufe ule Ule Ochie Nyocha System (RHCSA). Onye ọ bụla nwere ike ịbanye na nyocha nke RHCE ma ọ bụrụ na ọ gaghị ebu ụzọ nyochaa nyocha RHCSA, ọ bụ ezie na akaebe RHCE agaghị enye aka ruo mgbe onye ọrụ asọmpi ga-enweta nzere abụọ ahụ. Ọ bụrụ na olileanya agaghị enweta RHCSA, Red Hat ga-ejide ihe nyocha RHCE nke onye asọmpi ahụ ma tinye akwụkwọ ahụ na onye RHCSA nyocha ya ozugbo ọ ga-akwụ ụgwọ na njedebe.
Okpu uhie na-akwado ihe ọ bụla nwere ike ime ka RHCE tụlee ile ma ọ dịkarịa ala otu n'ime ntụziaka ntụziaka ndị gọọmentị na-eme atụmatụ. Enweghị òkè na klas ndị a anaghị achọrọ, otu ga-ewe naanị ule. Ọtụtụ ndị na-enyocha akwụkwọ na-abata na klas dịka nke ugbu a na-enwe mmetụ na mmụta na-egosi na klas ahụ nwere ọganihu bara uru nye ha.
Okpu uhie na-enye ndị niile na-agba ume maka uhie Red Hat Enterprise Performance Tuning Examination Expertise (EX442) iji tụlee ewere akwụkwọ nke Red Hat Certificate of Expertise in Performance Tuning (RH442) classive class. Enweghị òkè na klas a adịghị mkpa, n'ihi ya, mmadụ nwere ike iji naanị ule ahụ. Ọtụtụ ndị asọmpi na-amụba amụba bụ ndị biara na klas dị ka ndị nwere ugbu a na ihe ọmụma dị iche iche ekwuwo na klas ahụ nwere ihe dị mma maka ha.
Ahụmahụ bụ nke kachasị mma maka ule. Mee nke ahụ, ọbụna ndị nwere ahụmahụ ebe a na-enwe oghere na nghọta ha, ya mere Red okpu na-enye ohere niile maka RHCJA iji tụlee ewere JB248 JBoss maka ndị nchịkwa m. Usoro a na-enye isi ihe a, ọ ga-abụkwa ihe dị mkpa maka itinye aka yana nduzi dị mkpa maka ịdị njikere maka ule.
Uhie okpu na-akọwa na olileanya ga-emeri Uhie okpu akwụkwọ nchịkwa System (RHCSA) ma ọ bụ Uhie okpu akwụkwọ na-arụ ọrụ (RHCE) tupu ị gbalịsie ike n'ule a, ma ọ dịghị mkpa. Ịghọta echiche dị n'etiti Java Enterprise Edition bụ ihe enyemaka, ọ bụ ezie na ndị asọmpi ekwesịghị ịbụ ndị injinia ma ọ bụ na nyocha a gụnyere ọrụ ngwa ngwa ọganihu.
Iji nyere gị aka ịtọlite, ebe nlele ahụ na-egosipụta errand zones ị nwere ike ịhụ anya kpuchie na ule. Ebe ndị a metụtara ma JBoss EAP 7.
Ọ na-ejikọta Uhie okpu System Nchịkwa M na II na ngwa ngwa RHCSA Rapid Sochie usoro (RH199) na Red Hat® Enterprise Linux®7 ma bu n'obi maka ndị na-eme ihe nchịkwa ndị dị ugbu a nwere nnukwu itinye aka na nzukọ Linux. Usoro nyochaa nyocha ndị ahụ ekpuchire na nchịkwa Red System System I (RH124) na II (RH134) na ọsọ ọsọ.
N'ime ihe doro anya na ihe ndị dị mkpa, ọ ga-adị njikere ịkwado ule Uhie Ụlọnga Nyocha System (RHCSA).
Rịba ama: Usoro a na-agbasawanye na nghọta nke ugbu a nke usoro Linux kpuchie usoro iwu. Ndị na-edozi iwu kwesịrị inwe ike ịme oku mgbe niile iji shea, rụọ ọrụ na nkwụsị ụgwọ, ma gaa na ibe mmadụ maka enyemaka. A na-eji nkwenye ndị na-enweghị ihe ọmụma a agba ume ka ha were Red Hat System Administration I (RH124) na II (RH134).
Gwa, ndokwa, na ịmepụta gburugburu ebe obibi nkesa na-eji Red Hat OpenStack Platform. Omume a na-egosi isi kpugula otu esi egbusi gburugburu igwe na-ekesa gburugburu Red Hat® OpenStack® Platform, tinyere nhazi, nhazi, na nkwado.
Omume a nwekwara ike inyere gị aka ịkwado maka Uhie okpu onye nchịkwa System na uhie uhie OpenStack ule (EX210).
Usoro a na-adabere Uhie okpu OpenStack Platform 8.
Oghere uhie OpenStack Administration II (CL210) ga-amalitekwa ịkwaga site na ijikwa OpenStack tinye na Horizon iji tinye n'ọrụ nke na-eme ka ọnụ ọgụgụ nhazi. Nyocha ndị eji eme nnyocha na-agụnye: mepee Red Hat OpenStack Platform na-eji OpenStack Director, na-elekọta ndị ahịa, ahịa, njirimara, akụkụ, foto, nchịkwa usoro, na ịkwakọ ngwaahịa, kọmputa (iwepụ na mgbubilata), ma mepụta foto a gbanwere.
Chọpụta otú e si arụ ọrụ mgbakwunye na nhazi nke Uhie okpu CloudForms. Uhie uhie CloudForms Hybrid Cloud Management na-egosi gị otu esi emepụta ihe dị iche iche na-emepụta ya na nhazi nke Uhie okpu CloudForms.
Akaụntụ Red Hat® nke ọkachamara na ngwakọ ojii Cloud Management bụ ule nkwupụta a na-egbu egbu. Ndi mmadu ndi natara akwukwo uzo ugwo onu ogugu n'enye uzo n'igwe na egosiputa aptitudes na imuta iziputa na ime ihe eji eme ihe n'egbado Uhie okpu CloudForms.
Ndị na-ejide akwụkwọ edemede nke ọkachamara na ngwakọ ojii Cloud Management nwere ike ịmepụta mmemme ndị a:
Kpoo okpu uhie CloudForms
Chepụta Uhie okpu CloudForms iji nyochaa ma ọ dịkarịa ala otu ndị na-ebunye ndị na-azụ ahịa
Jiri Uhie okpu ojii CloudForms iji mee nchịkwa nlekọta maka nhazi ihu ọma
Gbasawanye ike gị iji chịkwaa nhazi Linux ma nweta njikere maka udomo ule uhie uhie gị.
Red Hat® System Management III (RH254), nke a mara na Red Hat Enterprise Linux, ® 7, bu n'obi maka ndị nduzi nduzi Linux nwere ahụmahụ na-ejide Uhie okpu akwụkwọ nchịkwa System (RHCSA®) nkwenye ma ọ bụ hà aptitudes na onye ọ dị mkpa iji meghee ike ha iji dozie usoro ntanetị na Linux na ọkwa.
Usoro a na-eche na ị na-eziga ma na-elekọta usoro sava ọsọ na-agbakwụnye ngalaba Aha Service (DNS), MariaDB, Apache HTTPD, Postfix SMTP nullclients, ndokwa ntinye aka na System Network System (NFS) na Server Message Block (SMB), iSCSI initiators na lekwasịrị , ọganihu na ịhazi ihe na ịmepụta ọkụ ọkụ, na iji Bash shell na-eme ihe iji na-arụ ọrụ iji mee ka ọkpụkpụ, imepụta, na nyochaa usoro. Site na adreesị na aka-na labs, ndị nchịkwa ndị nweworo aka na RHCSA nkwenye ga-eme ka ha nwee ikike niile nke ule Red Hat Certified Engineer (RHCE) test (EX300).
Edere ma weputa ụyọkọ dị elu. Ihe nkedo, aka-na Red Hat® High Availability Clustering (RH436) na-egosi nchịkọta ụlọ ahịa, Uhie Ochie Elu Nweta Add-On, na nsụgharị mkpokọta nke nkwekọrịta nke Red Hat Global File System 2 (GFS2) na Uhie okpu Gluster Storage .
Emere maka ndị isi na-eduzi Linux®, usoro ihe omume 4 a na-egosi na-egosi ọrụ nyocha nke ụlọ. Ị ga-achọpụta otu esi esi zipu na ilekọta ikike ịkekọrịta na ihe nkesa nke na-enye ndị nchịkwa usoro zuru oke ịnweta ọrụ mgbasa ozi-nke bụ isi.
Ihe ọmụmụ a na-enyere gị aka ime atụmatụ maka Ụkpụrụ Uhie Ọkachamara nke Nnwale na High Availability Clustering exam (EX436).
Chọpụta otú e si ewepụta Red Hat Satellite server ma jiri ya zipu na ilekọta atụmatụ. Red Hat® Enterprise Deployment and Management Systems na-enyocha echiche na usoro dị mkpa maka ịmị mkpụrụ na ụba nchịkwa nke Red Hat Enterprise Linux®.
Usoro a dị na Satellite 5.
Ndị nyocha ga-akọwa otú ị ga-esi ewebata ma jiri nchekwa Satellite Satellite na ihe ùgwù dị mma na-aza iji gosipụta na ilekọta atụmatụ. Tupu ngwụcha nke usoro a, ndị na-eme ihe nhazi ga-arụpụta ụdị mpempe akwụkwọ RPM ha, ha ga-ejikwawo Subversion iji hụ mgbanwe maka ihe ndekọ. Omume a nwekwara ike inyere gị aka ịme atụmatụ maka Ọkachamara Ọkachamara nke Ọkachamara na Nyocha Systems (EX401).
Chọpụta otu esi emepe Red Hat Satellite 6
Oghere Red Hat Satellite 6 Administration (RH403) bụ usoro nyocha nke nyocha nke na-enyocha echiche na usoro dị mkpa maka nchịkọta nnukwu nchịkwa nke Red Hat® Enterprise Linux®. Ndị na-eme egwuregwu ga-achọpụta otu esi ewepụta Red Hat Satellite 6 na ihe nkesa ma tinye ya na usoro mmemme.
Usoro a dabeere na Red Hat Enterprise Linux 7 na Red Hat Satellite 6.
Ndị nchịkwa ga-eji Satellite Red Hat iji zoo usoro ndụ ndụ nke onye na-edebanye aha ya na atụmatụ ya, ma chọpụta otú nkwekọrịta si ejikọta na usoro mmemme na Puppet nchịkwa nchịkwa mgbe ị na-eziga.
Nweta ihe ọ chọrọ iji zipụ na ilekọta ọnọdụ dịpụrụ adịpụ. Red Hat Virtualization (RH318) na-enye ntụziaka ndị nwere nlezianya ntụziaka ntụziaka ka esi eji nchekwa Red Hat® Enterprise Linux® mee ihe site n'aka Red Hat Virtualization Suite.
Ndị nyocha na-enweta ihe aptitudes na ozi iji na-eme, na-eziga, na-elekọta, ma na-ebugharị ọrụ igwefoto Linux rụrụ arụ ma ọ bụ Red Hat Enterprise Linux servers utilizing Red Hat Virtualization Manager.
Ihe ọmụmụ a na-enyere ndị asọmpi aka njikere maka ule Nlereanya Ọcha Uhie (EX318), nke, ma ọ bụrụ na ha agafe, na-enweta ha Uhie okpu Onye Nyocha Virtualization Administrator (RHCVA) kwuru.
Chọpụta otú e si ejikwa Red Hat Ceph Nchekwa ma na-ahazi na Red Hat OpenStack Platform. Red Hat® Ceph Storage Architecture na nchịkwa (CEPH125) bụ otu n'ime atụmatụ Ngosipụta ngwa ngwa nke ọmụmụ site na Ọkụ Uhie. Ebumnuche nke ụbọchị ise a bụ maka ndị isi oche ma ọ bụ ndị nchịkwa ojii chọrọ ka ha zipu Red Hat Ceph Nchekwa na gburugburu ọgbọ ha yana oghere OpenStack® ha.
Red Hat Ceph Storage Architecture and Administration (CEPH125) na-ahazi gburugburu 3 iberibe. Akụkụ bụ isi bụ ihe dị n'ime na ntụgharị nke Ọkpụkpụ Red Hat Ceph Storage engine ma na-enye ntụziaka maka ikwe Red Hat Ceph Storage, gụnyere Ceph Storage Cluster, na Ceph Object Gateway, na Ceph Block Device. Akụkụ nke abụọ ahụ na-adabere na arụ ọrụ kwa ụbọchị nke ụyọkọ Ceph Storage na ụfọdụ nyocha na ntinye usoro nke ndị nlekọta nwere ike iji nye 24 × 7 ohere nke ikike. Ngalaba nke ato na-ekpuchi nchịkọta nke Chọta Ncheta na Glance na Cinder na Red Hat OpenStack Platform. Ihe odide a na-agbakwunye na ịmepụta Red Hat Ceph Storage dịka nchapu maka Swift na ịhazi ya na Keystone.
Chọpụta otú ị ga-esi webata, imepụta, jiri, na-agbanye Red Hat OpenStack Platform. A na-echere oghere Red Hat OpenStack M (CL110) maka isi ndị isi na-atụ aro iji actualize a na-akọwapụta gburugburu ebe obibi na-eji Uhie Uhie OpenStack® Platform.
Omume a ga-akụzi ntụziaka ịme ka ịmepụta ihe ngosi, dozie, jiri ya, ma mepee Red Hat OpenStack Platform. Usoro a na-ekpuchi nlekọta etiti obodo: àgwà (Keystone), ihe nkedo (Cinder), foto (Glance), nhazi (Neutron), ọgụgụ na onye nchịkwa (Nova), na nhazi (Horizon).
Gwa, ndokwa, na ịmepụta gburugburu ebe obibi nkesa na-eji Red Hat OpenStack Platform. Omume a na-egosi ndị nlekọta kpuchie otú ha ga-esi kpochapụ usoro mgbasa ozi kesara ekesa na Red Hat® OpenStack® Platform, gụnyere nhazi, nhazi, na nlekota.
Oghere Red Hat OpenStack Administration II (CL210) ga - amalitekwa ịkwaga site na ijikwa OpenStack jiri Horizon mee ihe iji tinye ọnụ ọnụahịa ọnụahịa. Nyocha ndị eji eme nnyocha na-agụnye: ịmepụta Uhie okpu OpenStack Platform na-eji OpenStack Director, nlekọta ndị ahịa, ụlọ ọrụ, njirimara, akụkụ, foto, usoro nchịkwa, na ịkwakọ ngwaahịa, kọmputa (iwepụ ma na-akụda), ma wuo foto.
Chọpụta otú ị ga-esi gosipụta otu ihe na-emepụta ma ọ bụ nhazi nke Uhie okpu CloudForms. Uhie uhie CloudCorms Hybrid Cloud Administration (CL216) na-egosi gị otu esi emepụta ma jiri Uhie Uhie CloudForms.
Ndị nyocha nwere ike ịchọpụta otu esi arụ ọrụ na CloudForms, gụnyere Red Hat Enterprise Virtualization, mechie nyocha na nhazi ndokwa, ígwè ọrụ arụ ọrụ (VM), ma nyefee akụkọ dị iche iche.
Chọpụta otú ị ga - esi eji Uhie Uhie CloudForms nghọta apparatuses. Uhie Uhie CloudForms Hybrid Cloud Operations (CL218) na-egosi gị otu esi eji uhie okpu CloudForms nghọta ngwaọrụ. Ndị nyocha nwere ike ịchọpụta otu esi agba ọsọ nchịkọta ngwaọrụ, melite ikike ịhazi ihe, dozie nkata na uru, na imepụta ndokwa.
Egbu Apache Qpid dị ka uru standalone ma ọ bụ dị ka akụrụngwa Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform. Ozizi Apache Qpid na Red Hat® Enterprise Linux® OpenStack®Platform (CL314) bụ maka ndị isi ụlọ ọrụ, ndị nlekọta igwe ojii, na ndị nchịkwa ojii na-eme atụmatụ imezi Apache Qpid dịka uru dị iche iche ma ọ bụ dịka akụrụngwa Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform.
Dezie RabbitMQ dị ka uru dị iche iche ma ọ bụ dị ka akụrụngwa Uhie Okpu OpenStack Platform.
A na-ezubere usoro a maka ndị isi oche ntụziaka, ndị nduzi ígwé ojii, na ndị na-achị ígwé ojii bụ ndị na-achọ igbu RabbitMQ dịka uru dị iche iche ma ọ bụ dịka akụrụngwa Red Hat OpenStack Platform.
Ozi RabbitMQ na uhie uhie OpenStack Platform bụ otu n'ime usoro mmepe ohuru nke ọmụmụ site na Ọzụzụ Uhie. Ịmalite ọmụmụ ihe ọhụrụ dị iche iche na-eme ka a mata ma baa uru na-echekwa ya ma na-eduzi ya dị ka ụlọ ọrụ ndị nduzi.
Na-enwetakwu banyere ihe ndị nwere ike ịnweta na ngwaọrụ nke uhie okpu OpenStack Platform.
Nnukwu ohere maka Red Hat® OpenStack® Platform (CL332) bụ maka ndị isi ụlọ ọrụ na ndị na-achị igwe ojii na-achọ inweta ohere dị elu maka uhie uhie OpenStack Platform. Usoro a na-eme ka ihe dị omimi banye n'ime ihe ndị dị elu na ịnweta ngwaọrụ karịa usoro uhie Red Hat OpenStack Administration (CL210).
Usoro a na-eji usoro ịchọta elu oghere elu na ndokwa dị elu nke nwere ike ịnweta ma na-enye atụmatụ dị oke mma ịmekọrịta ha na Red Hat OpenStack Platform. Ndị nchịkwa ga-eme nke ọ bụla n'ime ndị ọchịchị n'ụzọ dị mfe ma nwalee ọnọdụ ịda ogbenye. Ndị nchịkwa ga-eji Pacemaker, Corosync, CMAN ngwá, na HAProxy igbu ndị otu na ngwaọrụ ndị ọzọ nwere ike ịnweta.
Mee, nwalee, ma jigide ngwa Java-E kwekọrịtara site na mmalite ruo ọgwụgwụ
Ejiri maka ndị mmepụta Java ™ dị n'etiti, JBoss® Enterprise Application Development (JB225) mara gị na mpaghara Java EE 6, nkọwa, na ngwa ngwa mmemme (APIs).
Mee, nwalee, jigide ngwa Java EE
Chọpụta otú e si eme, nwalee, ma debe ngwa Java kwekọrọ na IE site na mmalite ruo ọgwụgwụ iji Red Hat® JBoss Developer Studio kpuchie Eclipse.
Mee ngwa Java bara uru zuru oke
N'ihe na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị ga-eji nnukwu ọkwá na-eme ihe n'ọdụ ụgbọelu JBoss Enterprise Application Platform 6, Contexts and Dependency I, Arquillian, JBoss Hibernate, RESTEasy, HornetQ, na ọganihu ndị ọzọ metụtara ya. ngwa Java ngwa ngwa.
Mee ihe niile gbasara ngwa ngwa
Kọwaa otú e si echepụta ngụkọta, gbalịsie ike iji nweta ngwa JavaServer Faces (JSF) 2 na njedebe n'ihu ederede, Java API maka Layer Web Services (JAX-RS) oyi, Layer JavaBeans (EJB), na Java Persistence API (JPA) oyi akwa nkà, itinye usoro nhazi nke ọma, nhazi, na usoro nyocha.
A Single Point Of Control Iji Jikwaa, Jikwaa, ma nyochaa okpu uhie gị Jboss Enterprise Middleware Ngwaahịa, Ngwa, na Ọrụ.
Uhie okpu JBoss Operations Network, akụkụ dị mkpa nke Uhie okpu JBoss na-enyefe ego, na-enye ọrụ na nchịkwa na nyocha ikike iji nchịkwa ọtụtụ ọnọdụ uhie uhie JBoss, nyere gị aka ịmepụta arụmọrụ arụmọrụ, belata ụgwọ, ma kwenye na ọ dị mma nsogbu maka ndị ahịa gị.
Uhie okpu JBoss Operations Network, akụkụ dị mkpa nke Uhie okpu JBoss nyere onyinye, nyere ọrụ na nchịkwa na nyochaa ikike iji dozie akụkụ ka ukwuu nke Uhie okpu JBoss gị, nyere gị aka ịmepụta arụmọrụ arụmọrụ, belata ụgwọ, ma kwenye nsogbu dị mma maka ndị ahịa gị.
Mgbasa SwitchYard na Okpu Uhie JBoss Fuse Service Service na-akọwa nyochaa nke JBoss Fuse Ọrụ Service na otú SwitchYard dabara na ya ngalaba, na-edugharị site na portrayals nke a ole na ole na-agbanwe na ngalaba na-edeba uru uru, gụnyere JavaBean, Camel, Iwu, na Business Nhazi usoro na ọkwa (BPMN). Nke a na-edugharị site na njigide na iji ọtụtụ ọnụ ụzọ na agbatị nke na-eme ka ndị injinịa kwadoro n'etiti ọnọdụ SwitchYard na "n'èzí ụwa." Ihe atụ nke ntinye / njikọ ndị a gụnyere HTTP, SOAP, SQL, REST, informing (JMS), mail, na nke ahụ bụ nanị ọnụ mmiri ice. Isiokwu ndị na-esonụ na-ejikọta njikwa nke Validators na Transformations iji nweta ozi gbasara ozi dịka ọ na-amụ site na njikọta ọnọdụ, na nyocha ọzọ / nhazi usoro. Nchebe kpuchiri n'akụkụ dị iche nke usoro ahụ.
Nyochaa otu esi emepụta, actualize, nwalee, ma zipụ atụmatụ ejiji (EIP) nke dabeere na ngwa itinye n'ọrụ Apache Camel.
Ngalaba Camel Development na Red Hat® JBoss® Fuse (JB421) bụ aka na-arụ, usoro nyocha nke na-enye ndị na-emepụta Java ™ na nhazi maka nghọta nke Apache Camel na nkwalite na akụrụngwa Uhie na-enye na nkwado nke ọganihu Camel.
A na-emepụta ọganihu camel gburugburu:
Ọmụmụ ihe nke na-akọwa njikọta ma ọ bụ iyi nke njikwa site na ọ dịkarịa ala otu nhazi na njirimara
Ihe nhazi nke naghachi azụ, gbanwee, ma gbanwee ozi n'ime iyi Camel.
Ngalaba nke na-enye ike ikwu okwu nke jikọrọ aka na ụwa dị n'èzí maka ịzụ na izipụ ozi.
Nyochaa otu esi esonyere usoro ọrụ na-ejikwa ngwa ahịa.
Ịmepụta Ngwaọrụ Ọrụ na Red Hat® JBoss® BPM Suite (JB427) bụ maka ndị injinia na ndị nhazi na-achọ ịkwado usoro ọrụ na-ejikwa azụmaahịa.
Site na nkwụnye aka, njedebe ga-ewere nchịkwa na uhie Uhie okpu JBoss BPM Suite, ihe dị mkpa na ịmepụta azụmahịa nke na-egosipụta (BPMN 2.0), na imezi ọrụ ọrụ n'ime Java ™ SE na ngwa Java EE. N'agbanyeghị na ị na-etinye usoro nhazi ọrụ, ndị na-enweghị isi ga-achọpụta otu esi enyocha ule ma nyochaa ngwa ndị ahụ na-eji Uhie Uhie JBoss Developer Studio. Ndị nyocha nwere ike ịchọpụta otu esi esi zipu usoro azụmahịa na ihuenyo ya.
Ọrụ ntinye ego nke ọrụ na okpu okpu JBoss Fuse Ndị bịara ga-ewere ihe a chọrọ iji nlekọta, zipu, naghachi Red okpu JBoss Fuse ma wuo echiche etiti nke osGi-eji ngwa tinye n'ọrụ Uhie okpu JBoss Fuse si components, gụnyere: Ogwe njikwa nchịkwa nyochaa ... Lee
Nyocha, ndokwa, nlekọta, ma zipu ngwa ngwa OSGi
Ọrụ Mgbasa Ozi (ESB) Ịnye ọrụ na Red Hat® JBoss® Fuse bụ usoro aka na-enye ndị nchịkwa System na ndị na-arụ ọrụ Java ™ nghọta nke Uhie okpu JBoss Fuse, ọrụ mgbasa ozi nke Apache ServiceMix.
Ndị ga - etinye aka na ike ịchọrọ, zipu, naghachi Red Hat JBoss Fuse ma wulite echiche dị elu nke osGi dabeere na ngwa itinye Uhie Uhie JBoss Fuse si ihe ndị gụnyere, gụnyere:
Nhazi site na iji Ngosipụta Fabric, Hawt.io, na Uhie okpu JBoss Developer Studio
Were ụzọ ọsọ ọsọ na-elekọta JBoss Fuse, JBoss AM-Q, na Apache Camel
Red Hat® JBoss® Na-eji ngwa ngwa (JB439) bụ usoro 5 nke na-enye ndị mmepe Java ™, ndị na-eme ihe nkiri, na Uhie Uhie JBoss Fuse na-achịkwa Uhie okpu JBoss Fuse, Uhie okpu JBoss A-MQ ), na Apache Camel.
Were ihe omuma ị nwere ike ịmepụta ma mezuo ntinye aka na-emepụta ihe (EIP) tinye n'ọrụ Camel, ma chọpụta otú ị ga-esi kpọpụta EIPs na Uhie okpu JBoss Fuse-ihe mgbapụta uru (ESB) dabere na Apache ServiceMix. Ọzọkwa, chọpụta otú ị ga-esi jiri Uhie Uhie JBoss A-MQ-nkwupụta nzuzo na Apache Camel.
Chọpụta otú ị ga-esi tinye ihe ọmụma na isi ihe dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, tebụl, echiche, na usoro.
Red Hat® JBoss® Data Virtualization Development na-egosi ndị ọrụ ntanetịime na ndị nlekọta ka esi eme ihe ọmụma na isi ihe dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, tebụl, echiche, na usoro. Site na aka-na labs, nchịkọta ga-achọpụta otu esi ezite ndị ọcha ndị a maka JDBC na uru weebụ bara uru. Omume a nwere ike inyere ndị aka nyocha aka na nhazi ha maka Uhie Uhie nke Ihe Nlereanya na Nyocha Data Virtualization (EX450).
Nyochaa otu esi ewebata matrik ozi, wulite ihe eji edebere na nchekwa, ụyọkọ na ụlọ nchebe, na mbara igwe bụ ókè site na ebe ahụ.
Red Hat® JBoss® Grid Development Grid (JB453) na-etinye uche na ndokwa nke idebe ma na-achịkwa ngalaba ụlọ ahịa. Ndị nchịkwa ga-achọpụta ụzọ isi nweta ụlọ ahịa na ụlọ akwụkwọ na ụzọ ndị dịpụrụ adịpụ (ejigide na ndị na-abụghị ndị a na-ejikọta). Ọzọkwa, nchịkọta ga-achọpụta otú e si enweta ihe ọmụma, kpuchie ozi matrik ozi, na ịchọta netwọk ozi.
Chọpụta otú e si emepụta ma nwalee usoro iwu na-eji UI nke azụmahịa Central.
Iwu ederede na Red Hat® JBoss® BRMS (JB461) maara nke ọma na Uhie Uhie JBoss BRMS iwu moto na ikpo ọkụ. N'uzo a, nyocha ndi mmadu choputara otua esi eme onye n'eme ihe ma nyochaa iwu ndi jiri UI nke Business Central.
Usoro a na-adabere Uhie okpu JBoss BRMS 6.
Ngwakọta nke Iwu Nchịkwa (JB461) na Ịmepe Iwu Ngwa na Uhie okpu JBoss BRMS (JB463).
Ịnyocha Red Hat® JBoss® BRMS na-akwalite ọdịnaya site na Iwu Abụọ ahụ na Uhie okpu JBoss BRMS (JB461) na Ịzụlite Iwu Ngwa na Uhie okpu JBoss BRMS (JB463). Ọ na-egosi ndị na-ahụ maka azụmahịa, na-ejikwa ndị na-emepụta ihe, na ndị na-arụ ọrụ Java ™ ngwa ngwa iji mee, nwalee, nyocha, na ịchịkwa iwu azụmahịa.
A na-enye nkọwa site na isi, ọrụ aka na-eji Uhie okpu JBoss Developer Studio na Uhie okpu JBoss BRMS bụ nke a na-atụ anya inye ohere iji mee ma na-elekọta azụmahịa na-achịkwa na ọnọdụ okike. Omume a nwere ike inyere gị aka ịkwado maka akwụkwọ uhie uhie nke ọkachamara na Business Control Exam (EX465).
Rụlite ihe omume gị na usoro aka nke na-ahazi ngwa n'ihu na ụlọ ọrụ azụ
Ulo oru uzo okpu ugwo nke uzo okpu (JB501) bu uzo akuko Red Hat® JBoss®. Usoro a na-adabere na nyocha nke mkparịta ụka. Ọ bụ ihe na-arịwanye elu, nke na-akawanye aka na ebe ndị na-enweghị isi na-ahazi ngwa n'ihu na ụlọ ọrụ.
Usoro a na-adabere na nyocha nke mkparịta ụka. A na-eji ihe Red Hat Middleware mee ihe na ndokwa gụnyere Red Hat JBoss Data Grid, Uhie okpu JBoss Enterprise Application Platform, Uhie okpu JBoss BPM Suite, Uhie okpu JBoss Fuse, na Uhie okpu JBoss A-MQ. Ndị na-eme ihere ga-eji Java ™ EE 6, Java Persistence API (JPA), ụdị azụmahịa, iwu azụmahịa, Usoro Camel, ịchekwa, na imechi ya. Na-aga n'ihu, na ntụgharị nhazi nke gbasara ihe ndepụta ahụ, ka ha na-arụ ọrụ maka ndokwa ikpeazụ. A na-atụkwasị uche n'okpuru nyocha iji nweta ihe mmụta mbụ na ikike dị mkpa n'ihe ndị eji.
Na-eziga ihe ntanetị, nke nwere ike ịnweta ngwa ngwa na ngwa ngwa-azụ na igwe ojii.
Usoro a bụ maka ndị okenye na ndị ọrụ nchịkwa nke na-enwe mmasị na izipu nkwụsị, ịnweta ike ịnweta ngwa ngwa na ihe ndị na-adịghị mma na n'igwe ojii.
Usoro a dabere na Uhie okpu Gluster Storage 3.
Understudies ga-achọpụta otu esi ewebata, ndokwa, ma debe otu ìgwè Red Hat Nchekwa sava. Usoro ahụ ga-achọpụta ntanetị nke Intanet nke nwere ike ịnweta n'ụzọ zuru ezu (CIFS) na usoro nhazi nke usoro ihe ọmụma (NFS) na-eji Clustered Trivial DataBase (CTDB) mee ihe ndekọ na ime mkpesa, na geo-replication. N'ikpeazụ, ihe ndị ọzọ ga-achọpụta banyere usoro Hadoop maka Red Hat Nchekwa, nyochaa, na geo-replication.
Omume a nwere ike inyere gị aka ịkwado maka Ụkpụrụ Uhie Ọkụ nke Nlereanya na Ngwakọ ojii Nchekwa Nchekwa (EX236).
Chọpụta otú ị ga-esi gosi, lelee, ma dozie ikike na OpenStack.
Ụzọ nhie Red Hat OpenStack Administration III (CL310) na-enye aka dị ukwuu-n'ịkwadebe ndị nlekọta nlekọta nwere ahụmahụ na esi eji nchekwa Red Hat® Ceph Storage na usoro nchịkwa nke OpenStack® Neutron. Usoro nchịkwa ga-emepụta ọnọdụ nke Ceph na nhazi ya dị ka azụ azụ maka OpenStack, ma dozie ma jiri ngwongwo OpenStack Neutron mee ihe.
Usoro a na-adabere Uhie okpu OpenStack Platform 6.
Usoro nchịkọta ga-esite na ngalaba nke Ceph na ndokwa ya dị ka azụ azụ maka OpenStack, na imewe ma jiri ngwongwo OpenStack Neutron mee ihe.